सरकारलाई कांग्रेस सांसद पन्तको प्रश्न: यती समूहसँग किन सती गएको?
On: २०७६ माघ २९ गते, बुधबार, ०२:५४ बजे प्रकाशित
काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्तले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी सरकारले यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा दिएकोले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताएकी छन्।
उनले पाथीभराको जग्गा किन सित्तैमा यतीलाई दिएको भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्।
‘शिवपुरीको जग्गा वार्षिक ४० हजारमा किन दिइयो? यतीसँग सती जानु सरकार के कारणले हो?,’ उनले भनिन्, ‘एउटा ब्यापारीक समुहलाई राज्यको सम्पत्तिको जिम्मा लगाउनु के कारणले हो, प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहन्छु।’
पन्तले चीनमा रहेका नेपालीलाई सरकारले छिटो उद्धार गर्नुपर्ने पनि बताइन्।
‘कर्णालीमा सिटामोल अभावले ९ जनाको ज्यान गएको छ। महंगी बढेको छ। चीनमा नेपालीहरू उद्धारको याचना गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री मुरलीको धुनमा हुनुहुन्छ। म सोच्ने गर्छु चीनमा अलपत्र दुरदराजका नागरिकले प्रधानमन्त्रीको संगीतमय नयाँ अवतार कसरी हेरे होलान्? उनीहरूलाई कति लाज लाग्यो होला?’
२०७६ माघ २९ गते, बुधबार, ०२:५४ बजे प्रकाशित